The Golaha Deegaanka Iowa (IEC) waa isbahaysiga ururada kala duwan iyo shakhsiyaadka wada shaqeeya si loo ilaaliyo bay'ada dabiiciga ah ee Iowa. Waxay ka shaqeeyaan siyaasad si ay u hagaajiyaan tayada biyaha ee Iowa iyo meelaha hoose ee Wabiga Mississippi iyo Gacanka Mexico. Warshadaha beeraha Iowa waxay soo saartaa dakhliga beeraha iyo xoolaha, taas oo ah isha ugu weyn ee wasaqda biyaha iyo waxyeelo weyn u geysata Goobta Dhimashada ee Gacanka. Istaraatiijiyada McKnight ee lagu yareeynayo wasakheynta beeraha iyo isgoysyada wabiga waqooyiga ee Mississippi River, IEC waxay heshay taageero dhaqaale oo hawsheeda ah si ay hoos ugu dhigto wasakheynta beeraha Iowa beeraha.
Iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyadda IEC ee lagu yareeynayo isfahanka wasaqda ah, waxay la wareegeen waddada si toos ah ula hadlaan qoysaska beeraha ku saabsan ilaalinta. Waxay la hadleen dhowr beeralay oo kala duwan oo leh dhaqamo kala duwan, falsafad, dalagyo, iyo tayada ciidda, hase yeeshee waxay wadaagaan walaacyada qaarkood. Dhammaantood waxay muujiyeen dareen masuuliyad ah oo ku saabsan ciidda iyo maamulka biyaha iyo dhammaantood waxay tijaabiyeen habdhaqanka ilaalinta, laakiin dhammaantood waxay sheegeen in kaydinta qalab cusub oo lagu fulinayo farsamooyinkaas ay qaadan karto sanado. IEC waxay heshay macluumaad qiimo leh waxayna samaysay xiriiro wanaagsan oo la xidhiidha booqashooyinkan, qaar ka mid ah beeralaydii ay la hadlay ayaa sheegay in ay u malaynayeen in bay'aduhu ay tahay inay gacan ka geystaan barayaasha beeraha iyo kuwa aan beeraleyda ahayn oo ku saabsan arrimaha tayada biyaha, taas oo ah waxa saxda ah ee qorshaha IEC .
IEC waxay si firfircoon u shaqeysaa siyaasadda dadweynaha si ay u bixiso jawi nabadgelyo leh oo ku filan dhammaan dadka yaryar. Waxay diirada saaraan waxbarashada dadweynaha iyo dhismaha isbahaysiga si ay u siiyaan Iowans codsi ku saabsan arrimaha saameynaya tayada nolosha iyo inay ilaaliyaan ilaha dabiiciga ah ee Iowa ee jiilalka hadda iyo kuwa mustaqbalka.